युगसम्बाद साप्ताहिक - हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले
Monday, 12.09.2019, 11:00am (GMT+5.5) Home Contact
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले
Tuesday, 12.11.2012, 03:21pm (GMT+5.5)
० अहिले चलिरहेको रस्साकस्सीले हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू असफल भए भन्न थालिएको छ । तपाईं त्यो धारणासंग सहमत हुनुहुन्छ ?
म त्यो कुरा मान्न तयार छैन ।
० नेताहरूले काम गर्न पनि नसक्ने र असफल भयौं भन्न पनि नसक्ने स्थितिमा रहेको त मान्नुहुन्छ ?
हामीले नेपालमा विचित्रको परिवर्तन खेप्यौं । पहिले राणा शासन विरोधी क्रान्ति गरियो । त्यही आन्दोलन गर्ने नेताहरूसंग हामी मिसिएर २०४६ सालमा परिवर्तन गर्यौं २०६२।०६३ को आन्दोलनको नेता पनि हामी नै भयौं । अर्थात् राणा, निरंकुशतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका परिवर्तनकारीहरू नै गणतन्त्रका लागि पनि नेतै भैदिए । यसले गर्दा मुलुकमा एकैचोटी ठूलठूलो फड्को मार्ने खालको आन्दोलनलाई हाम्रा केही विशिष्ठ नेताहरूले आत्मसात गर्न नसकेका मात्र हुन् । उनीहरू अयोग्य असक्षम, कामचोर भन्ने शब्द प्रयोग गर्न मलाई मन लाग्दैन किनभने यिनै नेताहरूलाई जनताले ठूल्ठूलो परिवर्तनमा साथ दिएका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले २००७ सालको आन्दोलनमा पनि नेतृत्व गर्नुभो, मैले उहाँहरू दुबैजनासंग काम गरें । २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि उहाँहरूले नै नेतृत्व लिनुभो । पछि मनमोहन अधिकारी बित्नुभो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६२।०६३ को आन्दोलनको पनि नेतृत्व लिनुभो । उहाँहरूसंगै जो हुर्किएका छन् उनीहरू कसैलाई पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रका बारेमा थाहै छैन ।
० नेपाली राजनीति परिपक्व छैन अर्थात् यहाँहरूले आलोकाँचो राजनीति गरिरहनुभएको छ भन्न सकिन्छ ?
म यहाँ ‘हरू’ भन्ने मान्दिन । जसले सकेन त्यसलाई दोष दिउँ न । जस्तो यो संविधानसभा सम्पूर्णतामा असफल भयो त्यसैले प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दलका अध्यक्षले फेरि संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ भने । यो धर्तीमा कहीं नभएको कुरा हो । यो सफल भएको भए त फेरि संविधानसभाको चुनाव गर्नै पर्दैनथ्यो नि । संविधानसभा असफल भयो, संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सम्पूर्ण हिसाबमा असफल भए । त्यसै हुनाले नेताहरू भनेर भन्दिन । म ट्वाकट्वाकी भन्छु ठूलो पार्टीको नेता भएको हुनाले पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम, झलनाथ, माधव नेपाल, सुशील कोइराला सबै असफल भए ।
० त्यसो हो भने यहाँले माथि जजसको नाम लिनु भयो उहाँहरूले नेपाली राजनीतिबाट विश्राम लिनुभए हुन्छ ?
त्यस्तो भए त अति राम्रो हुन्थ्यो । अस्ति भर्खर नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभो नि ‘म पार्टी राजनीतिबाट विश्रम लिन्छु’ भनेर सबैले त्यस्तै भन्दिए त अति राम्रो हुन्थ्यो । दुनियाँ अर्कै हुन्थ्यो ।
कांग्रेसका बूढा नेताहरू र हाम्रो पार्टीका भरतमोहन अधिकारी समेत २००७ सालदेखिको नेता हो । २०४६ सालको आन्दोलनमा देखापर्नुभएका नेताहरू नै २०६३ सालको आन्दोलनमा पनि आउनुभयो । उहाँहरूको अन्तिम लक्ष्य नै संसदीय प्रजातन्त्र नै व्यवस्था रहेछ । माओवादीले गणतन्त्र त हाम्रो एजेण्डा हो भन्छ तर यी सबैको दिमाग संसदीय प्रजातन्त्रको वरिपरि घुमिराखेको रहेछ । मुलुकमा फ्याट्ट गणतन्त्र आइदियो अब गणतन्त्रले उहाँहरूलाई अल्मल्यायो । अहिले भएको त्यत्ति हो ।
० त्यसो भए अहिलेको राजनीति गणतन्त्र चाहने र नचाहनेहरूको कित्ताकाटमा चलेको हो ?
हैन, हैन, अस्ति एकपटक म उहाँहरूले वार्ता गरेको ठाउँमा झुक्किएर पुगेको थिए । उहाँहरू कोही पनि गणतन्त्रको तहमा उक्लिनै सक्नुभएको रहेनछ । माओवादीले आफूलाई गणतन्त्रको मतियार माने पनि त्यो सब बेकार हो । संसदका बिरुद्ध राजासंग सहकार्य गर्ने माओवादी कसरी गणतन्त्रमा पुग्छ ?
० तर उनीहरू अझै पनि साम्यवादको कुरा गर्छन्, यो बुर्जुवा गणतन्त्रले हुँदैन भन्छन् नि ?
बुर्जुजा गणतन्त्र र साम्यवादी गणतन्त्र भनेको के हो त्यो त चाहियो नि । म पनि कार्ल माक्र्सको साम्यवाद पढेरै आएको मान्छे हुँ । गणतन्त्र गणतन्त्रै हो ।
० त्यसो भए अहिलेको राजनीति कहाँनेर केका लागि घुमिराखेको छ त ?
अहिले नेपालको राजनीति भूपी शेरचनको कविता भएको छ । मैले नेताहरूलाई अन्धो भनेको होइन, तर कविले भनिसकेपछि त मान्नैपर्यो । मान्छे कुर्सीमा पुगेपछि संसार बिर्सिदो रहेछ, जनता बिर्सिदो रहेछ । अहिले बाबुरामले देश पनि बिर्सिएको प्रमाण दिनुभो । कुर्सी अन्धाको हुँदोरहेछ ।
० डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भयो भने केही सहज हुने हो कि त्यसपछि पनि यस्तै रडाको देखिने हुन्छ त ?
अहिले जति नेताहरू सहमति गर्ने भनेर लागिपरेका छन् उनीहरूलाई एक एक महिनाको प्रधानमन्त्रीत्व दिएर बाँकीलाई सहप्रधानमन्त्री बनाइदिने हो भने केही होलो होला नभए हुनेवाला केही छैन ।
० तपाईं आफै पनि एक जिम्मेवार दलको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ कहिलेकाहीं जनताले के भन्लान् ? कार्यकर्ताले के भन्लान् भन्ने लाग्दैन ?
मेरो नेतातिर आँखा कहिल्यै गएन । परिबन्द अनौठो भएर नेता भएर राजनीतिमा लागे । पुलिसले कुटेको दिनदेखि साथीहरूको अगाडि अगुवा जस्तो वा नेता भएर राजनीतिमा लागे, मलाई मभन्दा माथि कोही हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन । पदको हिसाबले महासचिव, अध्यक्ष हुन्छन्, त्यसलाई म सम्मान गर्छु तर निर्णय त म आफैं गर्छु ।
मैले अहिले तपाईंसंग कुरा गरिरहँदा के देखिराखेको छु भने हाम्रा यी नेताहरू जो बन्द कोठामा बस्छन् र वार्ता गर्छन् भनिन्छ तर वार्ता गर्छन् कि गर्दैनन् मलाई थाहा छैन । किनभने वार्ता गरेपछि एउटा वाक्य भए पनि साझा निस्कन्छ । वार्ता अहिलेसम्मका व्यर्थ भएका छन् ।
एक दुई दिन हो र ६ वर्षदेखि वार्ताका परिणामहरू नकारात्मक छन् । नेताहरू कस्ता छन् भने संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्छ भन्छन्, निर्वाचन आयोग गर्न सकिंदैन भन्छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराऊ भन्छ र निर्वाचन आयोग पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सक्छौं भन्छ तर नेताहरू भन्छन् स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु हुँदैन । त्यसैले हाम्रा नेताहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन । बुरुक बुरुक उफ्रेर संघीयता संघीयता भन्छन् तर यिनीहरूलाई संघीयता के हो भन्ने पनि थाहा छैन ।
संघीयताको सिद्धान्तलाई समात्ने हो भने समुदायको शासन हो । नेताहरू प्रदेशमा लडाइँ गर्छन्, तल गाविसलाई के के अधिकार दिने भन्ने कहिल्यै छलफल गरेका छैनन् । त्यसै हुनाले यी नेताहरू र असफल संविधानसभाले नेपाली राजनीतिमा गति समाएसम्म हामीले दुःख पाइरहन्छौं ।
० कतिपय विश्लेषकहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई नबुझेको वा बुझपचाइदिएर यस्तो अवस्था आएको पनि भन्छन् । यहाँलाई के लाग्छ ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । किनभने एमाले र कांग्रेसले यो यो विषयमा अड्ङ्गा थापे भन्ने हुनुपर्यो नि । नेपालका बुद्धिजीवी कस्ता छन् भने उग्रवामपन्थी र वामपन्थी एउटै हुन् भन्छन् । उग्रवामपन्थी भनेको माक्र्सवाद विरोधी हो र वामपन्थी भनेको माक्र्सवादी हो भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएका बुद्धिजीवी नेपालमा छन् । त्यसैले उनीहरूले भन्नुपर्यो कि एमालेले यो यो गल्ती गर्यो, कांग्रेसले यहाँ यहाँ चुक्यो भनेर । अहिले सबै कुरा विगार्ने त माओवादी एक्लै हो नि । एक्लै माओवादीले सबैलाई घुमाइरहेको छ ।
० माओवादीलाई यहाँसम्म ल्याउने काम त तपाईंहरूले नै गर्नुभएको हो । यहाँहरूले नै शहर ल्याएर सबभन्दा ठूलो बनाइदिनुभयो नि हैन ?
माओवादी जंगलमा जाँदा १६ हजार ९ सय मान्छे मारिसकेका थिए । अर्को ६ वर्षमा उनीहरूले ५० हजार मान्छे मार्थे । हत्याको अन्तहीन शृङ्खलालाई कति वर्ष थेग्ने । माओवादीले कुन कुरामा बदमासी गर्यो, अझ उनीहरूकै भाषामा भन्दा गद्दारी कहाँनेर गर्यो भने शान्ति प्रक्रियाप्रति गद्दारी गर्यो । त्यो दोष कांग्रेस एमालेले बोक्न मिल्दैन । शान्ति प्रक्रिया जति पनि बुँदामा सहमति भएको छ त्यसमा कांग्रेस एमालेका नेताहरू झुक्किए भन्न सकिन्छ तर माओवादीलाई ठूलो त जनताले मतमार्फत बनाइदिए । कांग्रेस र एमालेका नेताले नै माओवादीलाई ठूलो बनाइदिए भन्न सकिंदैन ।
० त्यसो भए अरु लामो समयसम्म मुलुकको राजनीति यसै गरी अघि बढ्छ ?
हेर्नुस, जसले जे नाम राखे पनि माओवादीको अन्तिम लक्ष्य भनेको नौलो जनवाद नै हो । नौलो जनवाद भनेको एकदलीय तानाशाही हो । उग्रवामपन्थको त्यो भन्दा अर्को विकल्प सत्तामा हुँदैहुँदैन । पहिले बन्दुकबाट सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर लडाइँमा गए, त्यसमा सम्पूर्णतामै असफल भए, बन्दुकले मृत्यु मात्र दिंदोरहेछ, सत्ता दिंदो रहेनछ भन्ने बुझेपछि यिनीहरू अर्को चाल खेलेर चुनावमा आए माओवादीले चुनाव जित्नु नेपाली जनताको ठूलो दुर्भाग्य हो । पहिले पार्टी भयो, पहिलो पार्टी भैसकेपछि यही बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ तर अलि बढी कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे यिनीहरूले आफूले पाउँदा खेरी के के गर्दा रहेछन् भन्ने त झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै देखियो । मैले त त्यतिबेला नै भनेको थिए, झलनाथ खनालजी अध्यक्ष एमालेको हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री एमाओवादीको हुनु भो भनेर । अहिले बाबुरामजीलाई फेला पारेका छन् र सत्ता कब्जाको कार्यनीति सफल भएको ठानिरहेका छन् ।
"देश र जनताका हक अधिकार सुनिश्चत नभएसम्म संघर्षहरू भैरहन्छन्" - मोहन बैद्य किरण, वरिष्ठ उपाध्� (04.30.2012)
विवादित विषयको निर्णय मतदानबाट गरिए संविधान बन्ने सम्भावना कम हुन्छ – डा. मीनेन्द्र रिजाल, नेपा� (04.23.2012)